Weerar loo adeegsaday Bam gacmeed ayaa xalay lagu qaaday Waaxda 1-aad ee Baariyow Xaafadda Galmudug deegaanka Garasbaaley ee duleedka Muqdisho sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka.
Afar ruux oo saddex kamid ah ay yihiin ciidamada ilaalinayay waaxda ayaa dhaawac soo gaaray iyo qof kale oo shacab ah, waxaana rasaas riday Ciidamada qaraxa kadib, inkasta oo aan lasoo sheegin waxyeelo ka dhalatay.
Ciidamada ayaa ku dhaqaaqay howlgalo sida caadada ah, waxaana ay soo qabteen shaqsiyaad ay tuhmayaan inkasta oo qaarkood markii dambe ay sii daayeen sida ay xaqiijiyeen ilo deegaanka ah oo Mustaqbal la hadlay.
Ilaa haatan ma jiro war kasoo baxay Maamulka Garasbaaley & hay’adaha ammaanka Dowladda Federaalka oo ay ku faah-faahiyeen qaraxa geystay khasaaraha dhaawaca ah, howlgalka xigay iyo shaqsiyaadka laamaha ammaanka ay u xireen.
Waaxyaha Deegaanka Garasbaaley ayaa marar kala duwan lagu tuuray Bam Gacmeed sababay khasaare kala duwan oo gaaray askarta ilaalada ka ah & dadka rayidka ah ee ka dhaw, halka laamana ammaanka ay u xiraan shaqsiyaad oo ay mariyaan baaris.
“Waxaa lagugu wareejiyay dalka oo is heysto Hogaamiyahe